Realme C15 Qualcomm Edition waxaa lagu shaaciyey Snapdragon 460 iyo batari 6.000 mAh | Androidsis
Realme waxay ku dhawaaqday nooc ka duwan kan Realme C15 ayaa dib loo bilaabay bishii Luulyo, markan ka faaiidaysanaya processor kaas oo leh waxqabad wanaagsan sida Snapdragon 460. Qalabka cusub ayaa lagu magacaabaa Realme C15 Qualcomm Edition waana wax la mid ah kii isaga ka horreeyay ee wax walba, marka laga reebo processor-ka.
Shirkaddu waxay xaqiijineysaa qaabkan ka dib waxay arkeen in Realme C15 oo wata qalabka 'MediaTek chip' uu si guul ah u dhacay markii ay ka baxday suuqyada kala duwan iyada oo in ka badan 200.000 oo unug la iibiyay. Hadda wuxuu doonayaa inuu u soo bandhigo macaamiishaas raadinaya xoogaa xoog ah iyo waliba cusbooneysiinta barnaamijyada loo ballanqaaday.
1 Realme C15 Qualcomm Edition, wax walba oo ku saabsan taleefankan cusub
Realme C15 Qualcomm Edition, wax walba oo ku saabsan taleefankan cusub
El Realme C15 Qualcomm Edition ayaa la timid shaashad muhiim ah oo 6,5-inji ah Nooca HD +, waxay timid iyadoo lagu ilaalinayo Gorilla Glass oo ka ilaalin doonta xoqida iyo xitaa dareeraha. Dhanka hore waxaad ku arki kartaa 8 megapixel dareemo dareemo dhibic ah oo aad loogu aqbali karo sawirrada iyo fiidiyowyada illaa xallinta Full HD.
Munaasabaddan, ayaa loo yaqaan 'Snapdragon 460 chip' 8-xudun xawaare dhan 1,8 GHz (4 koronto) iyo 1,5 GHz (4 gees), 3/4 GB oo RAM ah iyo keyd 32/64 GB ah. Bateriga ayaa ah waxa uu ballanqaadka ugu badan yahay, waa 6.000 mAh oo xawaare dhakhso leh oo ah 18W uu soconayo maalinta oo dhan.
Realme C15 Qualcomm Edition ayaa la timid kamarad afaraad, midka ugu weyni waa 13 megapixel, kan labaadna waa 8 megapixel ultrawide sensor, kan saddexaadna waa 2 megapixel macro, midka afraadna waa 2 megapixel sensor qoto dheer Waa terminal leh isku xirnaanta 4G-LTE, GPS, Wi-Fi b / g / n, Bluetooth 5.0 iyo USB nooca C. Nidaamka waa Android 10 oo leh Realme UI lakab ahaan.
REALME C15 TAYADA QUALCOMM
MUUQAAL 6.5-inji IPS LCD leh HD + xallinta
PRORESOR 460-core Snapdragon 8
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 32 / 64 GB
KAAMARKA DIBADDA 13 MP Sensor Main / 8 MP Ultra Wide Sensor / 2 MP Macro Sensor / Sensor Qoto Dheer MP 2
BATARY 6.000 mAh oo si dhakhso ah u soo rogaysa 18W
Isku xirnaanta 4G / Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / USB-C / GPS / NFC
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 164.5 x 75.9 x 9.8 mm / 209 garaam
El Realme C15 Qualcomm Edition ayaa timid maanta Oktoobar 29 qiimo ah INR 9,999 (115 euro in la beddelo) oo ah nooca 3/32 GB iyo INR 10,999 (126 euro) oo loogu talagalay nooca 4/64 GB. Waxaa jiri doona ugu yaraan laba midab oo wax soo saar ah, buluug iyo qalin cawl.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme C15 Qualcomm Edition ayaa lagu shaaciyey Snapdragon 460 iyo batari 6.000 mAh
Sida loo beddelo iftiinka sawiradaada Sawirada Google